तराई नेपाल, तराई झुण्ड र कोरोना
आज विश्व कोरोनासँग युद्धमा छ। नेपालको कुल जनसंख्याको आधा जति तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् जसलाई अहिले मधेश भनिन्छ। लेखकलाई तराई शब्द मनपर्दछ। यो लेख तराईको लगभग १०० बर्षको जन्म, अनुभव र कष्टमा आधारित छ। प्रश्न यो छ कि लेखक केवल ४५ बर्षको हो? यो लेख लेखकको आफ्नै अभिभावक, हजुरबा हजुरआमा र रगत र पवित्र भूमिको पसीनाको मिश्रण हो।
तराईलाई पवित्र सीता माताको चिल्लो, फूर्तिलो खाद्यान्न र भूमिका रूपमा चिनिन्थ्यो। विविधतामा एकता, सामाजिक सद्भाव, पारस्परिक भाईचारेको अनुकरणीय क्षेत्र थियो। जीवन कसैको क्षमता सीप र अनुभवको आधारमा चलाइएको थियो। त्यसबेला पनि धनी-गरीब, पहाडी-तराई समुदाय, ब्राह्मण-दलित, न्याय-अन्याय थिए। यसको बाबजुद पनि, एकको क्षमता, क्षमता, सीप र अनुभव, भ्रातृत्व, सद्भाव र विवेकको आधारमा एकतामा रहे। स्वर्ग उस्तै थियो।
तर यो परिस्थिति समाज र विदेशी हितको केही विषाक्त तत्वहरूका लागि कहिले पनि स्वीकार्य थिएन। उनले विविधता, सामाजिक-धार्मिक सहिष्णुता, हाम्रो एकताका स्तम्भहरूमा एकतामा आक्रमण गरे। गलत उद्देश्यको लागि, तिनीहरूले गलत उद्देश्यको साथ, ती गरीबहरू, तराई समुदायका साथ पहाडी मानिसहरू, दलितहरूसँग ब्राह्मणहरू, न्यायको साथ अन्यायपूर्ण, योग्य, अयोग्य, अयोग्यको साथ अन्यायपूर्णसँग लडे। विषाक्त रूख फैलाउन जनशक्ति वा संगठन आवश्यक थियो। त्यसबेला सब भन्दा ठूलो स्गठन राजनैतिक संगठन थियो जुन आज पनि अवस्थित छ। बिस्तारै विषाक्त रूख फैलियो र एकताको संसार हल्लियो। विषाक्त रूखले विशाल हागा बिजा फैलिरहेको छ, जुन आज मुक्ति मोर्चा, उत्थान आयोग, अधिकार आयोग, एकता समाज आदि भनेर चिनिन्छ।
प्रकृति वा समयको पनि यसको आफ्नै वेग छ। समय बितेको छ जीवनशैली आवश्यकता र उद्देश्य पनि परिवर्तन भयो। विषालु रूख फैलँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी विकास आदि जस्ता समाजका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकता र अस्थिरता, बेरोजगारी, अराजकता, भ्रष्टाचार, अन्याय आदिलाई बढ्न दिइएन। यसको परिणाम स्वरूप आज तराई समुदाय हिमाली समुदाय, ब्राह्मण, दलित, न्यायमूर्ति, अन्यायपूर्ण, अयोग्य, अयोग्य, इमानदार, बेइमानबाट डराएको छ।
तराई वा देशको मेरुदण्ड पनि जवान छ। धेरैजसो युवा जो यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन त्यहि विषादी रूखको सानो स्टप बनाउन बाध्य छन्। जो आफैंलाई तराईको मसीह ठान्छन् उनीहरूले यस अवस्थाको पूर्ण फाइदा लिइरहेका छन्। यो तिनीहरूको अस्तित्व पनि हो। जनता यस्तो अवस्थाबाट थकित छन्। उनीहरूको मसिहामा नयाँ प्रणाली ल्याउने योजना छ किनकि तिनीहरू ठूलो संगठनका हुन् र जे भए पनि हाम्रो अवस्था झन् खराब हुँदै गइरहेको छ। जबसम्म नयाँ स्वतन्त्र पीढीले दायाँ देखि गलत गर्न बोलाउँदैन र आफैलाई परिवर्तनको उदाहरण बनाउन सक्दैन, हाम्रो अवस्था अझ बिग्रन्छ। आशाको कुनै किरण अहिले सम्म देखिएको छैन। तराईको प्रतिनिधित्व गर्ने युवा नेतृत्व पनि उही स्ट्रिममा देखा पर्दछ। चमत्कारको विकल्प छैन। अन्यथा, आत्म दुरुपयोग बाहेक अरु विकल्प छैन। युवाहरूले आफ्नो वंशको भविष्यको लागि सकरात्मक परिवर्तनको नेतृत्व गर्न आवश्यक छ। म किन आफ्नो भविष्य निश्चित स्वार्थी समुहलाई सुपुर्त गर्दैछु? अब यसबाट छुटकारा पाउन धेरै ढिलो भइसक्यो।
अब स्वार्थी बगालबाट छुटकारा पाउने समय हो। जसले परिवर्तनको लागि नेतृत्व गर्‍यो र थप तराईलाई भत्कायो। गाह्रो तर असम्भव छैन। आज हामीले कोरोनासँग लड्नै पर्छ, तर हामी पूरै लंगडो छौं। हाम्रो लडाई गर्ने क्षमता यस कोरोना जस्तो राजनीतिले खोसेको छ जुन्ड हामी वास्तवमा कुरानलाई लड्न सक्छौं तर हामी जित्न सक्दैनौं। एक बगैंचा बाघ बनाइएको छ।
कोरोना लगभग तराईमा सबैभन्दा ठूलो प्रभावको लागी पक्का छ। अस्पतालहरू, स्रोतहरू, इच्छा शक्ति, ईमानदारीको कमी पनि छ। यसलाई कसरी पार गर्ने भनेर हेर्न बाँकी छ। यद्यपि, अझै तराईमा केही इमान्दार, ज्ञानी, जीवित व्यक्तिहरू छन्, अब बढ्नुबाहेक अरू विकल्प छैन।